Tijaabooyinka caadi ahaan waxay cabbiraan saameynta celceliska celceliska, laakiin saameyntu maahan mid isku mid ah qof kasta.
Fikradda labaad ee muhiimka ah ee ka gudubta wixii ka baxsan tijaabooyinka sahlan waa feejignaanta saameynta daaweynta . Tijaabada Schultz et al. (2007) xoog leh u muujinaya sida daaweyntu ay u saameyn karto noocyada kala duwan ee dadka (sawirka 4.4). Si kastaba ha ahaatee, baaritaanada intooda badani, cilmi-baarayaashu waxay diiradda saareen saamaynta daaweynta celceliska sababtoo ah waxaa jiray tiro yar oo ka-qaybgalayaal ah oo yarna laga yaqaanay iyaga. Si kastaba ha ahaatee, tijaabooyinka dijitalka ah, si kastaba ha ahaatee, waxaa badanaa jira dad badan oo kaqaybgalayaasha ah iyo in ka badan ayaa la og yahay iyaga. Meelahan xogta kala duwan, cilmi-baarayaasha oo sii wadaya inay qiyaasaan waxyeellada celceliska daaweynta celceliska ayaa ka maqnaan doona siyaabaha qiyaasaha hiddaha ee waxyeellooyinka daaweynta ay bixin karaan tilmaamo ku saabsan sida daaweyntu u shaqeyso, sida loo horumarin karo, iyo sida loo beegsan karo kuwa ay u badan tahay inay faa'iido u leeyihiin.
Laba tusaale oo ka mid ah saameynta daaweynta ee saameynta daaweynta ayaa ka yimaada cilmi-baaris dheeraad ah oo ku saabsan Warbixinnada Tamarta Guriga. Marka hore, Allcott (2011) isticmaashay cabbirka tirada badan (600,000 oo qoys) si ay u sii kala qaybiyaan saamiga iyo qiyaasaan saamaynta Qorshaha Tamarta ee Guriga iyada oo la xaddiday isticmaalka tamarta daaweynta kahor. Iyadoo Schultz et al. (2007) helay farqiga u dhexeeya dadka isticmaala culeyska culus, Allcott (2011) ogaaday in ay jiraan farqi u dhexeeyay kooxda culus iyo kuwa fudud. Tusaale ahaan, dadka ugu culus (kuwan hoos ku xajistay) waxay hoos u dhigeen isticmaalka tamarta laba jeer sida mid ka mid ah bartamaha dadka isticmaala culeyska (tirada 4.8). Dheeraad ah, qiyaasidda saameynta hab-dhaqanka ka hor-daaweynta ayaa sidoo kale muujisay in aysan jirin wax saameyn ah boomerang, xitaa dadka isticmaala kuwa ugu da'da yar (Jaantuska 4.8).
Jaantus 4.8: Horumarinta daaweynta ee saameynta daaweynta ee Allcott (2011) . Hoos-u-dhaca isticmaalka tamarta ayaa ka duwanaa dadka gaajo kala duwan ee isticmaalka aasaasiga ah. Laga soo bilaabo Allcott (2011) , sawirka 8.
Daraasaddan la xidhiidha, Costa and Kahn (2013) qanacsan tahay in waxtarka Warbixinta Guriga ee Gurigu ay ku kala duwanaan karto iyada oo ku saleysan ka qeybqaataha siyaasadeed ee kaqeybgalaha iyo in daaweyntu ay dhab ahaantii keento dad leh fikrado gaar ah si kor loogu qaado isticmaalka korontada. Si kale haddii loo dhigo, waxay kufaraxsan yihiin in Qorshayaasha Tamarta ee Guriga (Home Energy Reports) ay abuuri karaan saameyn boomerang ah noocyada dadka. Si loo qiimeeyo suurtogalnimada, Costa iyo Kahn waxay isku darsameen xogta loo yaqaan 'Opower data' iyada oo xogta laga soo iibsaday qoryaha saddexaad ee ku jira macluumaadka sida diiwaan gelinta xisbiyada, deeqaha ururrada deegaanka, iyo ka qaybgalka qoysaska barnaamijyada tamarta la cusbooneysiin karo. Iyadoo wadatashadaan isku dhafan, Costa iyo Kahn waxay ogaadeen in Qorshaha Tamarta ee Home Energy ay soo saartey saameyno la mid ah kuwa ka qaybgalayaasha leh fikrado kala duwan; ma jirin wax caddayn ah in koox kasta ay muujinayso saamaynta boomerang (jaantuska 4.9).
Jaantuska 4.9: Horumarinta saameynta daaweynta ee Costa and Kahn (2013) . Saameynta celceliska daaweynta celceliska saamiga dhamaantood waa -2.1% [-1.5%, -2.7%]. Ka dib markii la isku darey macluumaadka tijaabada macluumaadka ku saabsan qoysaska, Costa and Kahn (2013) isticmaaleen qaabab isdabajoog ah oo tirakoob ah si ay u qiyaasaan saameynta daaweynta ee kooxo gaar ah oo dad ah. Laba qiyaasood ayaa loo soo bandhigay koox kasta sababtoo ah qiyaasuhu waxay ku xiran yihiin tusaalooyinka ay ku jiraan moodooyinka tirakoobka (eeg moodooyinka 4 iyo 6 ee jadwalka 3 iyo 4 ee Costa and Kahn (2013) ). Maadaama ay tusaalahan muujinayso, saameynaha daaweynta waxay u kala duwanaan karaan dadka kala duwan iyo qiyaasaha saameynta daaweynta ee ka imanaysa qaababka tirakoobka waxay ku xiran tahay faahfaahinta moodooyinkaas (Grimmer, Messing, and Westwood 2014) . Waxaa laga soo qaatay Costa and Kahn (2013) , jaantusyada 3 iyo 4.
Sababtoo ah labadan tusaale oo muujinaya, da'da digital, waxaan u dhaqaaqi karnaa qiimeynta saameynta daaweynta celceliska qiyaasta hiddaha ee waxtarka daaweynta maxaa yeelay waxaanu heli karnaa kaqeybgalayaal badan oo wax badan ka ogaano kaqeybgalayaashaas. Barashada hideerinta daaweynta saamaynta daaweynta waxay awood u leedahay in lagu beegsado daaweynta meesha ugu waxtarka badan leh, bixiso xaqiiqooyinka dhiirigelinaya horumarka aragtida cusub, oo ku siin talooyin ku saabsan hababka suurtagalka ah, mawduucaan hadda aan u jeedo.